China KZ Series Petrochemical Usoro mgbapụta Ngosipụta emepụta na ndị na-eweta ya | KAIQUAN
Usoro nfuli ndị a dị mma iji nyefee mmiri dị ọcha ma ọ bụ nke na-enweghị mmetọ na-enweghị ntụpọ na-enweghị ntụpọ siri ike. Nke a na usoro mgbapụta na-bụ-eji mmanụ nụchaa, petrochemical ụlọ ọrụ, chemical ụlọ ọrụ, coal nhazi, akwụkwọ ụlọ ọrụ, oké osimiri ụlọ ọrụ,
ụlọ ọrụ ike, nri na ihe ndị ọzọ.
ikike Q: 0,5 ~ 3000m3 / awa
Isi H: 4 ~ 230m
Nrụgide ọrụ (p): uru kachasị nwere ike ịbụ 7.5MPa.
Ọnọdụ okpomọkụ (t): -45 ~ + 400
API610 th8 / th9 / th10 / th11 imewe ọkọlọtọ
Usoro nfuli ndị a dị mma iji nyefee nnọpụiche dị ọcha ma ọ bụ na-enweghị mmerụ dị ọcha corrosive mmiri na-enweghị ihe siri ike. A na-ejikarị mgbapụta usoro a eme ihe maka mmanu mmanụ, Petrochemical ụlọ ọrụ, chemical ụlọ ọrụ, coal nhazi, akwụkwọ ụlọ ọrụ, oké osimiri ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ ike, nri, ahịa ọgwụ, nchekwa gburugburu ebe obibi na ihe ndị ọzọ.
KZA petrochemical centrifugal usoro mgbapụta kwekọrọ n'ụkpụrụ AOI610 yabụ enwere ụfọdụ atụmatụ n'okpuru:
1) Nrụpụta mgbapụta bụ ihe a pụrụ ịdabere na ya ma dị nchebe ma ọrụ mgbapụta na-adịgide adịgide.
2) Nfuli arụmọrụ na nkezi dị elu na nchekwa nchekwa ume.
3) Mgbapụta cavitation arụmọrụ dị mma ma ọ dị mma karịa ngwaahịa ndị yiri ya. Obere obere cavitation nwere ike ịbụ 0.5m nke ọtụtụ ngwaahịa, ka ọ dị ugbu a, uru NPSHr nke ngwaahịa izugbe bụ ihe dị ka 1m. NPSHr dị ala pụtara ntinye nwụnye ala ka KZA mgbapụta pụtara obere ụgwọ ụlọ.
4) Nrụpụta ọrụ mgbapụta dị obosara na ikike kachasị nwere ike ịbụ 3000m3 / h na isi kachasị nwere ike ịbụ 230m, ka ọ dị ugbu a, a na-emechi ikike mgbapụta na isi isi ka o wee nwee ike ịhọrọ mgbapụta.
5) E nwere ụdị atọ dị jụụ, ikuku ikuku, ikuku jụrụ oyi na mmiri jụrụ oyi dịka ọrụ mgbapụta dị iche iche. Igwe ofufe na-ekpo ọkụ karịsịa kwesịrị ekwesị maka ebe enweghị mmiri dị ọcha.
6) Nhazi na mahadum di elu. N'akụkụ usoro ihe eji eme ihe, a na-agbanwe impeller na aru nke KZA na KZE.
7) A na-ahọrọ ihe eji emepụta mmiri mmiri site na ọkọlọtọ API dịka ọnọdụ ọrụ ma ọ bụ ndị ahịa si dị.
8) Open impeller na-haziri maka usoro isiokwu a mgbapụta dị iche iche na-arụ ọrụ na ọnọdụ.
Anyị ụlọ ọrụ natara ISO9001 quality certificate.And e nwere a nlezianya àgwà akara usoro n'oge mgbapụta imewe na usoro nke mere na àgwà nwere ike na-ekwe nkwa.
Ọrụ arụmọrụ: Ike Q = 0.5 ~ 3000m3 / h, Isi H = 4 ~ 230m
Nrụgide ọrụ (p): nwere ike ịbụ 2,5MPa (metụtara ihe onwunwe na ọnọdụ ọrụ, gosipụtara dị ka eserese PT)
Ọnọdụ ọrụ (t): -45 ~ + 180
Ọsọ ọkọlọtọ (n): 2950r / min na 1475r / min
Usoro nfuli ndị a dị mma iji nyefee mmiri dị ọcha ma ọ bụ nke na-enweghị mmetọ na-enweghị ntụpọ na-enweghị ntụpọ siri ike. A na-ejikarị usoro mgbapụta a eme ihe maka mmanu mmanụ, ụlọ ọrụ petrochemical, ụlọ ọrụ kemịkalụ, nhazi kol, ụlọ ọrụ akwụkwọ, ụlọ ọrụ n'oké osimiri, ụlọ ọrụ ike, nri, ahịa ọgwụ, nchebe gburugburu ebe obibi na ihe ndị ọzọ.
KZE, KZEF Petrochemcial centrifugal usoro mgbapụta na-manufatured dị ka API610 otú e nwere ụfọdụ atụmatụ n'okpuru:
Nrụgide ọrụ (p): KZE 2,5MPa KZEF 7.5MPa (nke metụtara ihe na ọnọdụ ọrụ, gosipụtara dị ka eserese PT)
Ọnọdụ ọrụ (t): -45 ~ + 400
Nke gara aga: VCP Series Vetikal tobaim mgbapụta
Osote: KCZ Series Chemical Industry Usoro mgbapụta